Antsirabe ho an'i Kristy | ADVANTISTA Federasiona Madagasikara Afovoany
Antsirabe ho an’i Kristy
Fiofanana ho an’ireo mpiasan’ny Radio Oasis Bongolava
Fararanom-batisa sy Fararano-na Pasitora ary Fararanom-piofanana teny Andraikiba androany Sabata 24 novambra 2018.
Ny hafatra nampitaina ho an’i ankizy ny tapany maraina dia nosintonina tao amin’i Ohab 28:20a « Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana » nentin’ny Departemanta miadidy ny Ankizy sy ny Vehivavy, ny Anb Volasoa Mamitiana.MIantso ny ankizy ho mpakato sy mahatoky amin’ny toromarika omena azy.
Tao amin’ny Zakaria 3 : 1- 4, izay manamafy fa na dia hiampanga aza Satana dia efa nofidin’Andriamanitra sy efa navela heloka isika ka efa mitafy an’i Kristy, toy ireo 69 mianadahy mianaka izay nanolo-tena ho amin’ny Batisa tamin’ity sabata ity.Ny Filohan’ny Federasiona Madagasikara Afovoany Ps Andriamparatiana Fanera no nitondra izay hafatra izay.
Tao aorian’ny antso dia niroso tamin’ny Batisan’izy 69 mianadahy mianaka ny fotoana.
Nandritra ity sabata ity koa no nanaovana tomban’ezaka niarahan’ireo mpitantan’asa sy ny Komisiona Antsirabe ho an’i Kristy.
Fa noharabaina manokana tamin’ny nanosorona azy ho Pasitora koa ny Pasitoran’ny Distrika ny Mahazoarivo Ps Andriamananiarivo Tiarson José sy ny Ankohonany.
Ny tapany hariva kosa dia ny fiofanana mahakasika ny Asa fitoriana sy ny fomba fiasa ao anatin’izany no nentin’ny Ps Ando mpitantan’asa ara-bola ao amin’ny FMC.Nohamafisiny fa mila miverina amin’ny fomba fiasa mandeha tsiroaroa, manomboka ao anatin’ny Fiangonana ary i Kristy tompon’ny Asa no iankinana.Rehefa miasa ny Fiangonana dia foana ho azy ny olana rehetra ary tsy misy olona tonga any an-danitra ka tsy mitondra fanahy.
Namaran’ny Filohan’ny Departemanta ny ASAFI Ps Ernest ny vatsim-panahy dia ny tokony hifehezana lohahevitra amin’ny 5S ( Sabbath, Second Coming, Sanctuary, State of the Dead, Sprit of Prohecy) hita tamin’ny lesona Sekoly Sabata, dia ny Sabata, ny Fiverenan’i Jesosy fanindroany, ny Fitoerana Masina, ny Toetry ny Maty, Ny Fanahy ny Faminaniana.
Ankoatr’izay dia ireo hira fiderana nanakoako nentin’ny antokom-pihiran’Antsirabe ho an’i Kristy.
Mitohy ny Asa Fitoriana fa tsy mijanona eo ary samy hiezaka hanatsara hatrany sy hiara-mientana ho amin’izay asa famonjem-panahy izay satria izay no antom-pisian’ny Fiangonana. Koa samia Mahery ny rehetra.
Na dia nanambana aza ny orana tamin’ity Sabata manokana ity dia tsy nahavanona ka Deraina Andriamanitra ny amin’izany.
Nanangona ny vaovao : Patrick RANDRIANASOLO
14 Aprily 2020 : Fampaherezana